Lool - Wikipedia
Iskuwareega goobada dunida oo muujineysa xaariijimaha loolasha iyo dhigaha.
Lool (Af Ingiriis : latitude; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) oo wadarteedu tahay Loolal waa nidaamka isku-xidhka xaglaha siman cabirka juquraafiga oogada dhulka. Xaglaha Loolasha waxaa lagu cabiraa degree.
Lool waa xariijimaha xagasha 0° oo ah dhulbadhaha ka bilaabma ilaa 90° cidhifka waqooyi iyo 90° kale dhanka cidhifka koonfureed. Xariijimaha loolashu waa kuwo isgarab socda oo ka yimaada bari ilaa galbeed ayagoo ku wareegaya goobada dhulka.
Cabirka loolasha iyo dhiguhu waa halbeega lagu calaamadeeyo oogada dhulka ayagoo tilmaamaya barta saxda ah ee meeshaas.
Tusaale ahaan, barta ay dhacdo magaalada Muqdisho waa Loolka 02°02′W (waqooyi) iyo dhigta 45°21′B (bari).
= Halbeega Loolasha =mars iyo moon
Isticmaalka Loolasha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Sharaxaada Amerigo Vespucci ee xaglaha dhigaha.
Dhigaha iyo loolasha waxaa loo isticmaalaa in lagu calaamadeeyo bar ama meel oogada dhulka ka mid ah. Tusaale ahaan, barta ay dhacdo magaalada Muqdisho waa Loolka 02°02′W (waqooyi) iyo dhigta 45°21′B (bari).
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Lool&oldid=209806"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 24 Febraayo 2021, marka ee eheed 01:56.